Izindaba - Abakwa-Nokia baqalise isihlukanisi esihlanganisa izinto esisodwa esizosiza ukuthuthukisa yonke inqubo ezenzakalelayo esikhungweni sokuhlela izinto saseChina
• Isihlukanisi sobuciko obuklanywe emisha emakethe yaseChina
• Ukusetshenziswa kokusebenza okuphezulu okuzenzakalelayo okuhlukaniswe ngocezu lobuchwepheshe obususelwa kuzinhlelo zokubona zobuhlakani (AI)
• Izidingo zesikhala esincane nokuhlanganiswa okulula ezinhlelweni ezikhona
AbakwaNokia baphinde balikhulisa ibanga lomkhiqizo wabo wezikhungo zokuhlunga amaphakheji ngokwakhiwa kwesihlukanisi se-single-piece se-super-compact ebonakalayo ikakhulukazi emakethe yaseChina. Ukuvela kwayo kwezobuchwepheshe kusekelwe kubuchwepheshe obuhlukanisiwe bokuhlukaniswa okukodwa okuhlukanisiwe.Lesi sihlukanisi esisha esihlaba umxhwele esihlangene sinezidingo zesikhala esincane futhi singahlanganiswa kalula kuzakhiwo zesistimu ezintsha nezikhona.Sendaweni engaphansi kwamamitha skwele ayi-7. , lesi sixazululo esihlakaniphile, esizenzakalelayo ngokuphelele singahlukanisa kuze kufike kumaphakeji amancane angama-7,000 ngehora, ngaphezu kokucubungula ngokushesha nangokushelela imiqulu emikhulu yamaphakeji osayizi abahlukahlukene, ubujamo, kanye nezinto zokupakisha, ezilungele izinyathelo ezilandelayo zenqubo yokuhlunga. I-Siemens single-piece separator isetshenziswe kabanzi emhlabeni, futhi isihlukanisi sayo esisha se-compact single-piece nayo isetshenziswe ngempumelelo eChina.
"Ngabahlukanisi bezinto ezihlangene ezibumbene ezintsha, amakhasimende angazuza ekongeni isikhala kanye nobuchwepheshe obusebenzayo," kusho u-Ye Qing, oyi-CEO yakwa-Nokia Logistics Automation Systems (Beijing) Co., Ltd. ”Iphothifoliyo yomkhiqizo eyandayo yakwa-Siemens kanye nezixazululo ezesabekayo kukhuphula kakhulu izinga lokuzenzakalela kwezinhlelo, kusiza izinkampani zezimpahla ukukhulisa amakhono azo okusebenza kanye nokonga izindleko. ”
Isihlukanisi sakwa-Nokia esizisebenzelayo esizenzakalelayo ngokuphelele sihlela kabusha amaphakheji aseduze nohlangothi abe ukugeleza okukodwa okuqhubekayo okunesikhala esisethiwe, lokhu kuzolungiselela iphakethe lezinyathelo ezizayo zokucubungula ezifana nokuskena, ukukala nokuhlunga. isihlukanisi sokubukwa okukodwa siyi-system esekwe nge-AI eyinkimbinkimbi yokubona engathola ngokunembile umumo, usayizi nendawo yephakeji ngalinye. Lolu lwazi ludluliselwa ngesikhathi sangempela ohlelweni lokulawula, olunquma imingcele yokwehlukanisa okukodwa bese lulungisa isivinini samabhande ngamanye ngokufanele.Inhloso enkulu ukufeza ukulawulwa okuqondile kwephake esikhaleni esincane kanye nokuhlukaniswa kwesiqephu okuzenzakalelayo ngokuphelele.
Ngokungeziwe kusihlukanisi esihlanganisa ucezu olulodwa, izihlukanisi ezijwayelekile zokubukwa okukodwa ziyatholakala ekucushweni okubili: amaphakheji wokuhlukanisa ama-single-piece separators i-Visicon Polaris (yamaphakeji amakhulu futhi asindayo) kanye nezihlukanisi ezincane ezibukwayo ezizodwa ezibuka i-Visicon Capella (yezincane namaphakheji alula).
I-Siemens Logistics Automation (Beijing) Co., Ltd. iyinkampani ephethwe ngokuphelele yakwa-Siemens Logistics eChina, enekomkhulu layo eBeijing.Ngamandla endawo, i-Siemens inganikeza amakhasimende izixazululo zomkhiqizo nezobuchwepheshe, izinsizakalo ezisezingeni kanye nokuqaliswa ngokuphelele kwephrojekthi yasendaweni.